တရုတ်နိုင်ငံမှ လူသားမဆန်သောလုပ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရုတ်နိုင်ငံမှ လူသားမဆန်သောလုပ်ရပ်
Posted by kanjosan on Oct 19, 2011 in News, World News | 10 comments
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် မနေ့က လမ်းသွားတတ်ခါစ နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်သည် လမ်းပေါ်တွင် လမ်လျှေက်သွားနေစဉ် ကားတိုက်ခံရပြီး လမ်းမပေါ်တွင် သွေးတလုံးလုံးဖြင့် လဲကျနေသည်ကို မည်သူမျှ ကယ်တင်ကူညီရန် မကြိုးစားဘဲ မသိလိုက်မသိဖာသာ ရှောင်ကွင်းသွာကြသည်။ လုံခြုံရေး ကင်မရာမှတ်တမ်းများအရ တိုက်လိုက်သော ဗန်ကားသည် ခဏမျှရပ်ပြီး ဆက်လက်မောင်းထွက်သွားသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာ ယော်ကျား၊ မိန်းမတို့သည်လည်း ကူညီကယ်တင်ရမှန်း မရှိဘဲ အကြင်နာတရားခေါင်းပါးစွာဖြင့် အဝေးမှ ရှောင်ကွင်းသွားကြသည်။ ၁၀ မိနစ်ခန်ကြာသောအခါ ဆာလာအိတ်ထမ်းလာသော မိန်းမတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး အိတ်ကိုချပြီး ကလေးငယ်ဆီ အမြန်ပြေးသွားကာ အကူအညီရှာလေသည်။
ကလေးမလေး ၀မ်သည် အဲ့သည်နေ့ နေ့လည်အထိ အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း။ ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ပူတယ်။ သူ့ဖခင်ကပြောပြသည်။ သူသည်ဖိုရှင် ဈေးတွင် Hardware အရောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် သူရော သူ့မိန်မရော အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီး ကလေးအပြင်ရောက်သွားမှန်း မသိကြပါ။ ကျွန်တော် ဒေါသလဲထွက်တယ်။ အကူအညီမဲသလိုလဲ ခံစားရတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသာ စောစောစီးစီး ကူညီလိုက်လျှင် ဒီလောက်အထိ အခြေအနေ ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ၀မ့်ဖခင်က ပြောသည်။ ကားသမားကို ရဲကဖမ်းဆီးထားပြီး ဖြစ်သည်။ ကားသမားက ငွေဖြင့် လာရောက်ညှိနှိုင်းသော်လည်း သူလက်မခံခဲ့ပေ။ ကလေးမလေး နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တို့မှ သွေးများ တလိမ့်လိမ့် အဆက်မပြတ် စီးကျနေသည်။ ကျွန်တော် ဘာကြောင့် တစ်ယောက်မျှ လမ်းပေါ်ကနေ ရွှေ့မပေး မကူညီလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး ။ နားမလည်နိုင်အောင်ဘဲ ဖြစ်မိတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ဒီနေ့ ဖယ်ရီစောင့်နေတုန်း …. ကျွန်မနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကားလမ်းမှာ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် မူးလဲတယ် … အသံတောင် ဖုန်း ဆိုပြီး မြည်သွားတယ် … ဒါကို ဘယ်သူမှ အနီးနားက ကူပြီး မထူပေးဘူး … မသိသလိုပဲ ဖြတ်သွားကြတယ် … ။ မိန်းမကြီးကလည်း ဖုတ်ဖတ်ခါပြီး သူ့ဘာသာ ပြန်ထတယ် …. ။
ကျွန်မအပါဝင် အနီးနားက လူအများစု မြင်ပေမယ့် ဘယ်သူ့မှ သွား မထူပေးတာ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့် ….. ။ အဖြစ်ပျက်ကပဲ မြန်ဆန်လွန်းလို့လား … ။ အကြင်နာတရားမဲ့တာလား မပြောတတ်တော့ဘူး ။ မိန်းမကြီးရဲ့ အ၀တ်စား ညစ်ပေပေတွေ ပေကုန်မှာစိုးလို့လား … ။ မူးမိုက်တယ်ဆိုပြီး ဟန်ဆောင်တာလား စသဖြင့် အတွေးများနေတုန်း ဘာမှ မလုပ်ပေးလိုက်မိဘူး …။ …ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဘာလို့ ငါ ရပ်ကြည့်မိပါလိမ့်လို့ တွေးနေမိတယ် … ။
တရုတ်နိုင်ငံတင်မဟုတ်ပါဘူး… ဒီနိုင်ငံမှာလည်း သွေးထွက်သံယိုဆိုလျှင် ကိုင်ဖို့ ကူညီဖို့ လက်တွန့်ကြပါတယ် … ။ သွေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါကူးစက်မှာက တကြောင်း ကူညီသူကပါ တစ်ခါတလေ ကန့်လန့် ကန့်လန့် အမှူတွဲထဲပါနေတတ်တာက တကြောင်းမို့ ဝေးဝေးရှောင်ကြတာဖြစ်မယ် ။
လူသတ်မှု့မှ အဟုတ်တာ တစ်စုံတစ်ခု Accident ဖြစ်လာရင် လူ့မှု့ရေးအရ အနောက်နိုင်ငံတွေစကားလုံးဆိုရင် လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားမှု့အရ အနီးဆုံး ဆေးခန်းလောက်တော့ ပို့ပေးသင့်ပါတယ်.. မ etone ပြောတဲ့ မိန်းမကြီးက သိပ်အခြေနေ မဆိုးတာရယ်… တစ်ခါတစ်ရံတော့လည်း အဲ့ဒီပုံစံဆိုရင် လိမ်လည်လှည့်ဖြားကြမှာ စိုးလို့ မကူညီတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးသလောက်တော့ အနည်းဆုံး လမ်းမကနေ ဘေးကိုရွှေ့ပြီး သူ့ရဲ့မိဘ အုပ်ထိန်းသူကို အကြောင်းကြားတာမျိုး.. အသက်တစ်ချောင်းကို အချိန်မှီ ကယ်တာမျိုးတော့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ကြပါတယ်…
ဒီကိစ္စကိုတော့ နိုင်ငံရေးပေါ်ရစီတစ်ခုလို လူမျိုးရေးတစ်ခုလုံးကို
မှန်တယ် ကိုကန်ဂျိုစံ ရေ
ဒီမှာက ရုတ်တရက် မူးလဲရင်
အက်စီးဒန့် တစ်ခု ဆိုရင်
ဘယ်သူကမှားတယ် ဘယ်သူက မှန်တယ် နဲ့ ပဲ
ဝိုင်းအုံပြီး မှတ်ချက်ပေးနေတာတွေ ကို
လူကြီးတစ်ယောက် အဘိုးကြီးပါ ဘုရားသွားမလိုကားဆောင့်နေတာ တချို့ ကားသမားတွေဆိုသူကိုမတင်ခြင်ကြဘူး အရမ်းအသက်ကြီးနေလို သန်2မာ2မရှိလို ဒီနေ့တော မိန်းမကြီးတစ်ယောက် 40ကျော်လောက်က သူကိုခေါ်နေရာပေးပြီး ပိုက်ဆံပါသူဘိုပေးလိုက်တာ နောက်ပြီး ကားပေါ်ကဆင်းတောလဲ သေချာတွဲပြီးချပေးတယ် ဒီလိုပါပဲ အဲလိုမျိုးတွေမမြင်ဘူးဘူး
လူပေါ်မူတည်ပါတယ် လုပ်ပေးတဲသူကတောလုပ်ပေးကျပါတယ် ကူညီကျပါတယ်……….
အက်စီးဒင့် လို့ ပြောရင် ဒီနေ့ မြန်မာပြည်က မြို့ အတော်များများမှာ ဖြစ်နေတာကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
ဆိုင်ကယ် တိုက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်။ကားတိုက်မှုဖြစ်တယ် ယာဉ်မောင်းထွက်ပြေးတယ်။ဥပဒေ ကြောင်းအရ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစား
တာမတွေ့ ရသလောက်ပါဘဲ။မတတ်နိုင်လို့ ၊မပြေးနိုင်လို့ ဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့ ပုံဖြစ်နေတယ်။ယာဉ်ကြီး၊ယာဉ်လေးဆို ပြီး ဥပဒေက တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။
မှားမှား၊မှန်မှန်. ယာဉ်ကြီးသမားက အပြစ်လို့ ဖြစ်နေတယ်။တကယ်ဆို ဥပဒေ ကကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်
အများပြည်သူ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ လမ်းမ ပေါ်က မမြင်တော်ရာတွေပျောက်ကွယ်သွားဖို့ ဆုတောင်းမျှော်လင့်မိပါတယ်နော်။
လူ့ဘဝမှာလည်း သင်ခန်းစာတွေက အများသားကလား … မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပေါ့လေ…
တစ်ချို့လဲ အကြံအဖန် လုပ်နေကြတော့ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ သူတွေလို ဖြစ်နေကြပြီပေါ့…
တခုခု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ချက်ခြင်း အနားသွားမကပ်ရဲကြဘူးလေ…
ကိုဘလက်ချော ရဲ့အဖြစ်မျိုးတွေက သက်သေပြနေသကိုးဗျ…
အမှုပါတ်မှာလဲ စိုးတာရယ်… အဆင်မသင့်ရင် တရားခံဖြစ်သွားနိုင်တာရယ်တွေကြောင့်
မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်… အကြံအဖန်လုပ်သူ နဲ့ကြုံရင် ထိထိရောက်ရောက်
အရေးယူခြင်းခံရသည်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြရင် တစ်ဖြည်းဖြည်း ပပျောက်သွားမယ်
ရန်ကုန်မှာ နေကြသူများ ခုလို အရေးပေါ်ဖြစ်ရင် ဘယ်ဖုန်းနံပါတ် ခေါ်ရမလဲ သိကြပါသလား…..
ခေါ်ရင်ရမရတော့ မသိဘူးနော်.. မခေါ်ဘူးလို့..
Emergency .. 199
Traffic Investigation ..201779
Traffic Control Branch .. 291 284~5
Emergency :- 191
Central Fire Station .. 252 011~22
Yangon General Hospital . 256112~31
Red Cross .. 38 36 84
Traffic Police .. 500 005
Traffic Police .. 05 5000005
Yangon Directory ဘေးနားရှိလို့ ကောက်ရေးပေးလိုက်တာ … ကိုယ့် Hand phone ထဲမှာ မှတ်ထားပေါ့။ အရေးပေါ်ရင် အသုံးတည့်ပါတယ်။
ှရွှေဂုံဒိုင် (SSC) ..544128 , 544116 , 541457
Asia royal , အာရှတော်ဝင် ..၅၃၈၀၅၅
၀ိတိုရိယ .. ၆၆၆၁၂၆